Mary Sharpe oo ah wargeyska Pre-TRF - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Mary Sharpe oo ka tirsan saxaafadda Pre-TRF
Fikradda Mary Sharpe ee nooc ka mid ah aasaaska si cilmi baarista sayniska ee ku saabsan jacaylka galmada looga dhigo mid si guud loo heli karo ayaa markii ugu horreysay la caddeeyay 2006. Sannadkaas Mary waxay ku soo bandhigtay warqad "Jinsiga iyo Balwadda" shirkii saddexaad ee cilmi nafsiga wanaagsan ee ka dhacay Portugal. Internetku wuxuu bilaabay inuu helo xoog ardayduna way ku adkaatay inay iska caabiyaan khalkhalka. Filimmada qaawan ee baahinaysa ayaa laga helay 'tuubada' laga bilaabo 2007 wixii ka dambeeyay. Mary iyo asxaabteedu waxay bilaabeen inay kormeeraan horumarka iyo arrimaha la xiriira caafimaadka, xiriirka iyo dambiyada sanadihii xigay. Way cadahay in dadweynaha guud, saamileyaasha iyo go'aan qaadayaashuba ay u baahnaayeen helitaan fudud ee sayniska oo bilaabay inuu ka soo baxo saamaynta internetku ku leeyahay dhaqankeena iyo yoolalka nolosha.
Mary Sharpe waxay bilowday inay la shaqeyneyso saameynta sawir-gacmeedka jacaylka ku saabsan jacaylka jacaylka dhowr sano ka hor. Hay'adda Reward Foundation waxaa loo aasaasay hay'ad samafal ah Scottish-ka.
Boggan waxaan ku xayirnaa aruurinta si ay u siiyaan aragtida fikirka hore taas oo horseeday horumarinta maareynta maareynta maaliyadda ee Mary.
Bilaha soo socda waxaan ku dari doonaa waxyaabo hore u sii dheer si aan u muujinno safarkeena.
Wixii asal ah oo dheeraad ah oo ku saabsan Mary, fiiri biography halkan.
Dagaallada nacaybka iyo balwadda 'waa inay ku bilaabataa dugsiga'
Waxaa qoray Maandeeq Hamish Macdonell, 11 Juunyo 2011.
Dhibaatooyinka mataanaha ee sectariism-ka iyo qabatinka ayaa ah kuwo xiriir dhow leh waana in loo sharxaa carruurta sida da'da yar illaa toban, sida uu qabo khabiir ku xeel dheer xallinta khilaafaadka.
Wasiirradu waxay si taxaddar leh u soo dhoweeyeen baaqaas, ka soo yeedhay Mary Sharpe, oo ah mid u doodda caalamiga ah, oo loogu talagalay ardayda dhigata dugsiyada iskuulada ku yaal Scotland in la baro khataraha ka jira isirka, iyo sidoo kale halista khamriga iyo daroogada. Labada, ayay aaminsan tahay, inay si dhaw isugu xidhan yihiin.
Ms Sharpe ayaa dhawaan ku soo laabatay Scotland kadib markii ay baaris ku sameysay xagjirnimada dhalinyarada muslimiinta ah ee Nato. Waxay dooneysaa inay xarun ka dhigato xallinta khilaafaadka Edinburgh kaas oo, rajeyneyso, inay awood u yeelan doonto inay gacan ka geysato la-dagaallanka diimaha.
Waxay aaminsan tahay in koox diimeed ku saleysan Scotland ay tahay mid aan sinaba loola xiriirin karin Dhibaatooyinka qaranka ee balwadaha - gaar ahaan aalkolada - oo waxay ku qanacsan tahay labadaba qabatinka iyo xallinta khilaafaadka inay ku jiraan manhajka haddii Scotland ay noqoto waddan dulqaad leh.
Kala qoqobnaanta diinta
Af-hayeenka Wasiirka Koowaad, oo daabici doona sharci wax looga qabanayo kala-jaadnimada usbuuca soo socda, ayaa sheegay in Ms Sharpe ay u muuqatay in badan ay ku bixin karto dooda. "Waxaan si aad ah u jeclaan lahayn inaan qaadno meel fog oo aan aragno waxa ay leedahay,"
Alex Salmond wuxuu dagaalka ka dhanka ah darisnimada ka dhigay muhiimadda koowaad ee maamulkiisa cusub oo sharciga ugu horreeyaana wuxuu noqon doonaa Sharciga la-dagaallanka dar-dar galinta, oo la filayo in baarlamaanka la horgeeyo toddobaadkan dhammaadka toddobaadkan.
Sharciga ayaa la rajaynayaa inuu ku kordhiyo muddada ugu badan ee xukun xabsiyeedka dambiyada nacaybka diintu ka bilaabato lix bilood ilaa shan sano, laguna ciqaabayo cinwaanada internetka ee nacaybka diineed iyo in si sharci darro ah loo soo bandhigo ciyaaraha kooxaha.
Mr Salmond ayaa u jeestay koox-kooxeed ka dib markii ay sii kordheen dhibaatooyinka ka jira gudaha iyo hareeraha ciyaaraha Old Firm xilli ciyaareedkii hore iyo ka dib markii looga shakiyay bambooyin loo diray Neil Lennon, maamulaha Celtic, iyo laba taageerayaal sare oo kooxda ah.
Wasiirka Koowaad wuxuu xiriir lalahaa dhibaatada khamriga ee Scotland iyo kala-jaadnimada markii uu dejiyay ahmiyadaha maamulka cusub ee baarlamaanka Scottish bishii la soo dhaafay. Mr Salmond wuxuu yiri: "Sectarianism-ku waxay ku safraan gacanta, ugu yaraan qeyb, oo leh karbaash kale oo ah nabdoonkeenna iyo farxaddeena - dhaqan xumada."
Ms Sharpe waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in Mr Salmond cadeeyay muhiimada ugu weyn ee xiriirka ka dhexeeya qabatinka iyo isku-duubnaanta isku dayga uu wax ka qabanayo arrinta waxayna sheegtay inay rajeynayso in doorashada maamulka cusub ee SNP ay siin doonto fursad ay howshan ku sii fogaan doonto. . Waxay tidhi "Aad ayaan ugu faraxsanahay isbedelka cimilada ee Scotland iyo rabitaanka hadda jira ee ah in waddanku la kulmo jinniyaddiisa," ayay tidhi.
Ms Sharpe waxay sheegtay in Scotland ay haysato dhibaatooyin culus oo balwadda leh oo ay ka mid yihiin aalkolada, nikotiin, sawirrada qaawan ee internet-ka, daroogada, qamaarka iyo cuntada qashinka - kuwaas oo dhamaantood, waxay ku adkaysatay, inay gacan ka geysatay sidii dalka looga saari lahaa jagooyinka ugu sarreeya ee caalamiga ah ee caafimaadka, saboolnimada iyo cayilka. Scotland waxay leedahay dhibaato gaar ah. Waxaan ku nool nahay dhaqan sun ah, ayay tidhi.
Waxay intaas ku dartay in sida kaliya ee asal u ah sababaha arrimahan si sax ah loogu xallin karo ay tahay in la beddelo manhajka dugsiga lana baro carruurta wax ku saabsan qabatinka iyo kala-jaadnimada toban jirka. Waa inaan galno iskuulada.
Waxay tidhi "Waa inaan wax barinnaa macallimiinta si ay carruurta uga dhigaan inay ogaadaan waxa dhacaya ka dibna ay saameyn ku yeeshaan waalidkood," ayay tidhi.
Waxay ku dartay: “Waxaa la igu soo koray Galbeedka Skotland. Waxaan tan arkay markaan koriyey oo ay weli tahay weli.
Ms Sharpe waxay tiri in kasta oo rabshadaha qoysku ay u muuqdeen inay kor u sii kacayaan ka dib ciyaarihii Old Firm, haddana koox diimeed lafteeda ayaa asal u ah; halkii ay ahayd uun muujinta dhibaatooyinka kale ee bulshada ee halista ah, oo ay ku jirto khamriga. Waxay intaas raacisay: “Caqabadaha haysta siyaasad-dejiyeyaasha ma ahan inay ku guuleystaan ​​quluubta iyo maskaxda dhalinyarada yar yari laakiin waa inay badbaadiyaan. Taas waxaa lagu sameyn karaa oo keliya waxbarashada. ”